ụgbọ mmiri, igwu na mmiri egwuregwu | Holmbygden.se
N'ọtụtụ ebe gburugburu Holmsjön nwere ọtụtụ ezi aja osimiri maka obi ụtọ sommarbad. The kasị gara bụ Västbyn na Sandnäset.
Na Sandnäset ọ bụ na-ekwe omume ịgbazite ugboelu igwe skii, na a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ na-eme.
N'ihi na ndị na-amasị boating bụ Holmsjön ebe kasị ukwuu ọdọ, banyere atọ nnù ogologo na 39 km² i ebe. Ọdọ na-ọma ruru eru n'ihi na obosara ibe na mmiri ski ma ọ bụ wakeboarding. Ọtụtụ ndị bi na okpomọkụ obi ọbịa họrọ ẹkedori ha ụgbọ mmiri a n'oge okpomọkụ.
Holm district si na mmiri Lee azụ map na-agụ ihe banyere Holms azu ebe a.
Na na na na naa n'ihi na a leisurely-agba ịnyịnya na a ụgbọ epeepe (Canadian) ọ bụla ọwa mmiri. Mgbe ahụ e nwere canoes ịgbazite na Österström. View udu na ozi kọntaktị.
Holmsjön na ha gbara agbata obi ọdọ Leringen mejupụtara a nnukwu mmiri na-esite maka ike ụlọ ọrụ na usoro ike osisi Leringsforsens (osisi nke mmiri na .pdf ebe a).
Noua bụ Holm Sea mmiri larịị nke banyere 201 mita n'elu oké osimiri na lowered oyi ala banyere 197 m.ö.h.
Lee taa mmiri etoju ebe a.
isi iyi: Mmiri akara ụlọ ọrụ.
Dị ka niile mmiri ndị ọ bụla ahịhịa na pụrụ ịbụ bara uru mara si na mmiri na ebili mmiri ma ọ bụ na ice. N'okpuru ebe ị pụrụ ịhụ a map nke Holmsjön na ntọala ya, na ibudata map tracks iji gị GPS, ma ọ bụ ama navigationsutrustning.
(Ị chọghị ịhụ map n'okpuru, ị nwere ike mkpa nri pịa a odo warara n'elu / ala nke ihe nchọgharị gị na họrọ “Gosi egbochi ọdịnaya” ma ọ bụ “ekwe”.)
bụ oké osimiri chaatị na ihuenyo zuru ma ọ bụ na-emeghe map na Google Maps (multiple peeji nke).
Chaatị dị iche iche nke mobile na gị n'ọkwá
Soro gị ọnọdụ GPS na-ahụ e kwuru n'ihi na ekwentị n'iji Google Maps.
1. Tụgharịa na GPS:en i iti-ụgbọ ala ama (iphone / gam akporo).
2. Tinye adreesị n'elu gị mobile nchọgharị.
3. Ọ bụrụ na ọ na-abịa elu a igbe “Complete edinam iji”, Na nke a, “Maps”.
Ugbu a, i nwere ike ịhụ Holm Lake ndabere, shoreline na gị ka gị na mobile phones.
Download track faịlụ dị iche iche formats maka GPS:bụ. High Click, “Save Target Dị…”.
Google Earth – Holmsjons_grund_(via_internet).kml (0,1MB) Ịgụ map online.
More na map, na map ahụ track
Holm Lake ndabere bụ a GPS track (s.k. “track”) na ya mara na ọdọ si dị iche iche ihe mgbakwasị na shoreline. The track nwere ike ikpokọta na GPS ma ọ bụ ama ekwentị eji Noua zere n'ihi na nke ụgbọ mmiri na oyi iji zere oké nkume ma ọ bụ mkpa ice. Zere edoghi na tour ga-odi mfe! Nwekwara ike-eji mgbe azu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ọzọ a ntọala na ọdọ.
Holmsjön nke an'Iwu na ama esịn ọtụtụ mmiri na oyi. Kart track e mere site n'obere ụgbọala tinyere ọdọ si shorelines oyi. na oge (Mars 2008) ọdọ e zie banyere 4 m tụnyere ndị mmiri n'oge okpomọkụ. The obodo nwere ezi oke ma ọ bụrụ na-agabiga na track zere n'ihi na. Ụfọdụ n'ime ihe ndị magburu onwe ntọala nwere ike n'ezie na-abụ na zuru miri ezu ma ruo mgbe ọdọ jupụtara ìhè.
The track na-kere Patrik Wikholm. Digital track nhazi na n'akwụkwọ nke Niklas Wikholm. Isiokwu njehie.
Omkörningsförbud på sträckan Tönn... GỤKWUO